Ukuhlukanisa Amakhasimende kuyisihluthulelo sakho sokukhula kwebhizinisi Ngo-2016 | Martech Zone
Ngo-2016, ukuhlukaniswa okuhlakaniphile kuzodlala indima ehamba phambili ezinhlelweni zomthengisi. Badinga ukwazi phakathi kwezilaleli zabo zamakhasimende namathemba ukuthi ngubani ohlanganyele kakhulu futhi onethonya. Behlome ngalolu lwazi, bangaletha imiyalezo ebhekiswe futhi efanele kuleli qembu elizothuthukisa ukuthengisa, ukugcinwa, nokwethembeka okuphelele.
Ithuluzi elilodwa lobuchwepheshe manje elitholakalela ukuhlukaniswa okuqondakalayo isici Sokuhlukanisa Izithameli kusuka Faka konke, umhlinzeki wedatha exhunyiwe analytics. Le sevisi isebenzisa idatha eqoqwe ezinkampanini ezingaphezu kwama-500,000 kanye nabathengi abangaphezu kwesigidi esisodwa. Le database enkulu iqukethe idatha yabantu kanye nethonya lomuntu ngamunye lezokuxhumana. Inkampani ingalayisha imininingo egciniwe yokuxhumana ye-imeyili kuHlelo Lwababukeli futhi ithole ubulili, indawo, ubudala, kanye nemininingwane yezokuxhumana.
Bephethe lolu lwazi, abathengisi bangakha imikhankaso ebhekiswe ngeziteshi ezahlukahlukene, ezinjengamanethiwekhi okuxhumana nomphakathi, amapulatifomu wokukhangisa, i-imeyili nokukhushulwa kwedeski losizo ngokwezifiso. Ukuhlukaniswa kuvumela ukwenziwa kokuqukethwe okuhambisana kakhulu nempilo yangempela yekhasimende. I-imeyili ekhuthaza umamukeli ukuthi “asilandele ku-Instagram” iba nengqondo enkulu uma kuqinisekiswa ukuthi, okungenani, bane-akhawunti ye-Instagram. Isenzo esithi "ukulandela" sidinga ukuchofoza noma okubili, esikhundleni senqubo yonke yokubhalisa.
Nalu uhlaka lwefayela le- Ukuhlukaniswa Kwezithameli Zonke inqubo nokuthi abathengisi bangayisebenzisa kanjani imininingwane evelayo:
Inkampani ilayisha uhlu lwayo lwe-imeyili
Injini yeSumAll ithola ama-akhawunti obhalisile e-Facebook, Twitter, naku-Instagram
Izinga lokuzibandakanya nelithonya lenethiwekhi ngayinye liyahlaziywa. Ukuzibandakanya ukuthi umsebenzisi uxhumana kangaki kuleyo sayithi yezenhlalo, futhi ithonya linani labalandeli.
Izibalo zabantu zidonswa ngokubhekisisa ikheli le-imeyili nge-database enkulu
Ithuluzi libuye libe nokuhlukaniswa okuthuthukile kwabasebenzisi be-Twitter okuvumela abathengisi ukuthi bafake uhlu lwezibambo ze-Twitter bese bedonsa imininingwane ye-imeyili neyabantu. Abathengisi bangasebenzisa izinsizakusebenza ukwakha i-Twitter kulandela ukuqiniseka ukuthi ekugcineni bangakwazi ukusebenzisa labo balandeli ngokuxhumana ngeziteshi eziningi.
Leli thuba leziteshi eziningi eliyinzuzo eyinhloko yokuhlukaniswa okunjalo. Amakhasimende alindele isipiliyoni esingaguquguquki futhi esihehayo, noma ngabe basebenzisana nomkhiqizo nge-Instagram noma ngedeski losizo lwengxoxo. Ithuluzi elifana ne-Audience Segmentation linamandla ngoba lingaqondisa abakhangisi ngezinga lokuzibandakanya umsebenzisi angaba nalo nesiteshi senhlalo. Cabanga ngabantu ababili, bobabili abanama-akhawunti we-Instagram, kepha omunye unabalandeli abayisikhombisa, kanti omunye unabalandeli abayizinkulungwane ezingama-42.4. Uma laba ababili behlanganiswa ndawonye emkhankasweni we- "Instagram", kuzoba nemiphumela ethile, kepha ayenzelwanga yona. Amakhasimende noma amathemba anokulandelwa okukhulu avumela imikhankaso eyenziwe ngokwezifiso neminikelo yokuphromotha njengoba inani lalo kuleso siteshi lingaba likhulu kakhulu.
Imininingwane yokuhlukaniswa komphakathi ingasetshenziselwa ukwazisa ideski losizo, i-CRM, namanye amapulatifomu wokuzenzakalela wokumaketha mayelana namakhasimende angaba yigugu. Isibonelo, ingxoxo yedeski losizo nohlelo lwefoni kungamaka abasebenzisi ngabalandeli abangaphezu kuka-100,000 be-Twitter, ngemiyalo ye-ejenti yokubanikeza isivumelwano esikhethekile esisekelwe ku-Twitter noma ukukhushulwa. Le ndlela ibhekiswe kakhulu, futhi igcwalisa nesidingo sokuthi amakhasimende amaningi abonakale njengabantu ngabanye, ikakhulukazi uma abathengisi benza okunikezwayo okunjalo ngendlela engenamthungo futhi engabonakali.
Ukuhlukaniswa okunjalo okufaka imininingwane yobudala kanye nemininingwane yabantu nakho kwenza nemidlalo eqinile ye-AdWords, njengoba abathengisi bangafanisa izikhangiso zabo ezibonisiwe namasethi athile wamakhasimende. Lokhu kubanikeza ithuba lokubhida ngamagama asemqoka, kepha kuzethameli eziqondisiwe ukuze imali ingasuki ekulawuleni.
Ukwehlukaniswa kuguqukela ngaphezu kwenani labantu elilula (abaneminyaka engama-20 kuya kwengama-35 eMassachusetts), kungena endaweni entsha efaka isimilo senethiwekhi yokuxhumana nezinye izenzo ezinikeza abathengisi umbono ogqame kakhudlwana futhi ofanele wamakhasimende abo.
Qalisa ku-SumAll Mahhala!
Tags: CRMFacebookusizoukwahlukanisaizibalo zomphakathiisambaTwitter
Jan 24, 2016 ngo-2: 19 PM
Dane, ngabe kukhona okulingana ne-B2B kwale sevisi?